मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कमाल गर्ने संकेत, पहिलो दिन नै यति कडा ! – GALAXY
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कमाल गर्ने संकेत, पहिलो दिन नै यति कडा !
काठमाडौं । प्रदेश १का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भटाभट निर्णय लिने संकेत गरेका छन् । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सबै निर्णय, नियुक्ति र सरुवा पुनरावलोकन र खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकार असंवैधानिक भन्दै उसले गरेका निर्णय एकमुस्ट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका १र१ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने, लोपोन्मुख सँस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईको राजनीतिक छलाङः प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले राजनीतिमा छलाङ मारेका छन् । नेकपा एमालेको राजनीतिमा लामो समय लागेका राई पार्टी फुट्दा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेका थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट बढेका राईलाई जुझारु नेताका रुपमा चिनिन्थ्यो । अनेरास्ववियूको अध्यक्ष भएका राई पछि पार्टी राजनीतिमा लागे ।
उनी वामपन्थी विचारधाराका विद्यार्थीको गढ मानिएको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका स्ववियू सभापति भएका थिए । राई विगतमा पनि माधव नेपालसँग निकट थिए । माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दा जहिले साथ दिदै आएका उनी पार्टी विभाजन हुँदा साथ दिन तयार भए ।
भोजपुर प्रदेश सभा १ क बाट २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका राई एमाले हुँदा केपी शर्मा ओली पक्षधरबाट पेलिएका थिए । भोजपुरबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा उनी मन्त्री बन्नबाट रोकिएका थिए ।
राईले चार वर्ष कुरेर राजनीतिमा जोखिम उठाउँदै आए । अन्तमा उनलाई मुख्यमन्त्री पद नै मिल्यो । नेकपा एमाले विभाजन हुँदा सचिव भीम आचार्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा लागे ।
अन्तिम समयमा आचार्यले माधव नेपालको साथ छाड्दा राजेन्द्रकुमार राईलाई अवसर आइपुगेको हो